Argentina, Colombia, Namibia nePeru, haifanirwe kunge isina zvirambidzo zvekufamba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Argentina, Colombia, Namibia nePeru, haifanirwe kunge isina zvirambidzo zvekufamba
Zvichitevera ongororo pasi pekurudziro yekusimudzwa zvishoma nezvishoma kwezvirambidzo zvenguva pfupi zvekufamba zvisina kukosha kupinda muEU, Kanzuru yakagadziridza rondedzero yenyika, matunhu ekutonga akakosha uye mamwe masangano uye zviremera zvematunhu izvo zvinorambidzwa kufamba zvinofanirwa kubviswa. Kunyanya, Argentina, Colombia, Namibia nePeru dzakawedzerwa kune iyo rondedzero.
Kushanya kusingakoshi kuenda kuEU kubva kunyika kana masangano asina kunyorwa muAnnex I kunorambidzwa kufamba kwenguva pfupi. Izvi hazvina rusaruro kune mukana wekuti nyika dziri nhengo dzisimudze murambidzo wenguva pfupi pakufamba kusingakoshi kuenda kuEU kune vafambi vanobaiwa zvizere.
Sezvinotsanangurwa muKurudziro yeKanzuru, runyorwa urwu rucharamba ruchiongororwa mavhiki maviri ega ega uye, sezvingave zvakadaro, kuvandudzwa.
Zvichienderana nemaitiro uye mamiriro akaiswa mukurudziro, kubva musi wa28 Gumiguru 2021 nyika dzenhengo dzinofanira kusimudza zvishoma nezvishoma zvirambidzo zvekufamba pamiganhu yekunze yevagari vemunyika dzinotevera dzechitatu:
China, zvichienderana nekusimbiswa kwekuenderana
Kurambidzwa kwekufamba kunofanirwawo kusimudzwa zvishoma nezvishoma kumatunhu akasarudzika eChina Hong Kong neMacao.
Pasi pechikamu chemasangano uye masimba enzvimbo asingazivikanwe senyika nenhengo imwe yenyika, zvirambidzo zvekufambisa zveTaiwan zvinofanirwawo kusimudzwa zvishoma nezvishoma.
Vagari veAndorra, Monaco, San Marino uye Vatican vanofanirwa kutariswa sevagari veEU nechinangwa chekurudziro iyi.
Maitiro ekuona nyika dzechitatu dzinofanirwa kusimudzwa chirambidzo chazvino chekufamba chakagadziridzwa musi wa20 Chivabvu 2021. Vanovhara mamiriro edenda uye mhinduro yese kuCOVID-19, pamwe nekuvimbika kweruzivo rwuripo uye data masosi. Kuwirirana kunofanirwawo kuverengerwa pane imwe nyaya-ne-kesi hwaro.
Schengen nyika dzakabatana (Iceland, Lichtenstein, Norway, Switzerland) zvakare vanotora chikamu mune izvi kurudziro.